မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ယနေ့ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာများ - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ယနေ့ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာများ
ခုတလော လူအများစိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်နှင့် ငြင်းခုံဆွေးနွေးနေကြတဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုပါဘဲ။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲနှင့်ပါတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာမြောက်များစွား ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဟာထင်ရှားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုရုံဖြင့် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် သိသာထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုမရနိုင်ပါ။ ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ အခြားအကြောင်းအရာ အများ အပြားရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအခန်းကဏ္ဍဟာ ထင်ရှားစွာပါဝင်ပါတယ်။ လို့ဘီဘီစီနဲ့ ဆွေးနွေးတုန်းကပြတ်ပြတ်သားသား ထောက်ပြထားပါတယ်။
ယနေ့ကျနော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေကို ကြည့်ပါ။
(၁) ပြည်တွင်းရှိပြည်သူလူထုပြည်တွင်းရှိ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့်ပြည်သူများဟာ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲ ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် အင်အားများဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းရှိပြည်သူလူထုတရပ်လုံး ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲ တွင် နိုးကြားစွာပါဝင်လာရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နှင့်အခြားဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်အဖွဲ့များဟာရရှိသည့်အခွင့်အရေးကိုအသုံးပြုပြီးဆက်လက်စည်းရုံး ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ အသိသာထင်ရှားဆုံးကတော့ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကြိုးမပ်းမှုဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းအင်အားစုများရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို သိရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်အစိုးရဟာ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုနှင့်ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုလုံးဝမပြုနိုင်သည့်အဆင့်သို့ရောက်အောင် ပြင်းပြင်း ထန်ထန်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ ပြည်တွင်းအင်အားစုများ အင်အားချိနဲ့နေသမျှ ကာလ ပါတ်လုံး ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ရောက်ဘို့ မမျှော်မှန်းနိုင်ပါ။
(၂) ပြည်ပရောက်မြန်မာပြည်သူများပြည်ပရောက်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းများဟာပြည်တွင်း အင်အားစုများ ၏လိုအပ်ချက်ကိုမလွဲမသွေပံ့ပိုးပေးရမယ့်တာဝန်ရှိသည်ကိုအထူးသတိပြုဘို့လိုပါတယ် ပြည်ပအတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းများကိုကြည့်မယ် ဆိုရင်ပြည်တွင်းရှိဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများထက် တစ်ဦး ချင်းအလိုက်ရော၊ အဖွဲ့အစည်းအလိုက်ပါ လွတ်လပ်မှုအပြည့်အ၀ရှိကြပါတယ်။ သို့ရာတွင် စည်းလုံး ညီညွတ်မှုမရှိခြင်းဆိုတဲ့ ရောဂါဆိုးကြီး၏ဖိစီးမှု ကြောင့်အဖွဲ့များအချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီး ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းများကို ယနေ့အထိ ရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောက်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပြည်တွင်းအင်အားစုများကို အရှိန်အဟုန်မြင့်ပြီး ကူညီရေးအတွက်ယနေ့ဆောင်ရွက်ရမယ့် အရေး ကြီးဆုံးတာဝန်ကတော့ ပြည်ပရောက်အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ညီညွတ်မှုကို အမြန်ဆုံး ကြိုးစားတည် ဆောက်ဘို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အသက် (၆၀)ပြည့် အထမ်းအမှတ်ပွဲတစ်ခုကို ကျနော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် အဲဒီဆန္ဒပြပွဲမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ကြွေးကြော်သံများ ကတော့....
ဒီကြွေးကြော်သံကိုကြည့်ရင် တစုံတခုလိုနေတာကို တွေ့ရပါမယ်။ အဲဒါကတော့
မင်းတို့ဘယ်လိုအရယူမလဲ? (ပြည်သူလူထုရဲ့) ညီညွတ်မှုဖြင့်ယူမယ်
ဆိုတဲ့အချက်ပါဘဲ။ ကျနော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို မညှာမတာဆန်းစစ်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ အဲဒီလို ဆန်းစစ်ရင်တွေ့ရမယ်အဓိကအချက်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးဘို့နှင့် ကိုယ့်ပြည်သူပြည်သားတွေ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတို့ကိုယုံကြည်ဘို့ လစ်ဟင်းနေခြင်း ဆိုတဲ့အချက်ပါဘဲ။ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ဆောင်ရွက် ပေးဘို့ သူများတွေကိုချည်းအော်ဟစ်တောင်းဆိုနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ အမှန်စင်စစ်တော့ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီး အင်တိုက်အားတိုက်မဆောင်ရွက်ရင်ဘာမှမရနိုင်ပါ အမေရိကန်အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာရဲ့အကူ အညီကို ချည်း မျော်လင့်စောင့်စားမနေသင့်ပါ။ အဓိကအင်အားဟာပြည်တွင်းမှာရှိတယ်။ ပြည်တွင်းအင်အားဖြင့်သာ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှိရပါမယ်။ ဒီလိုတိကျတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိပြီးရင် ယုံကြည် ချက်အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု အကောင် အထည်ဖေါ်ရပါမယ်။ ထိုင်နေလို့တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူး ဆိုတဲ့စကားဟာ အတိအကျမှန်တယ်ဆိုတာဝန်ခံ ရပါမယ်။
၃။ ဒီမိုကရေစီညီညွှတ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များပြည်ပရောက်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများဟာ မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ လွတ်လပ်မှုအပါအ၀င် အခြားအခွင့်အရေးများကို အချိန်မှီအသုံးပြုပြီး အင်အားစုများအတွင်း အထူး လိုအပ် နေတဲ့ ညီညွှတ်မှုကို အမြန်ဆုံးတည်ဆောက်ရပါမယ် မိမိတို့၏စွမ်းဆောင်မှု၊ နိုင်ငံတကာ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှု ကို ရယူဘို့ အမြန်လိုအပ်နေပါတယ်။ ထိုမှတဆင့်ပြည်တွင်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် ပြည်သူလူထု တစ်ရပ် လုံးအားပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရန် စွမ်းအားပြည့်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ် ဒီမိုကရေစီညီညွှတ်ရေး အဖွဲ့ဟာ အထက်ပါရည်ရွယ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ရန် အစပျိုးတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ရပါမယ်။
၁. ဒီမိုကရေစီညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ လျှောက်လှမ်းရမည့်ခရီးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရေတိုရေရှည်နည်းဗျူဟာများကို အမြန်ဆုံးချမှတ်ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် စွမ်းအားပြည့်ကြိုးပမ်းခြင်း။
၂. အဖွဲ့ဝင်တိုင်း မိမိလေ့လာသိရှိချက်များနှင့် ယခင်ကရရှိခဲ့ပြီးတဲ့ အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံတဲ့ ဆွေးနွေး ချက်များကို အဖွဲ့ဝင်များအတွင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း။
၃. တစ်ဦးစီအမှားကို အခြားအဖွဲ့ဝင်များက ခွင့်လွတ်သည့်စိတ်မွေးမြူပြီး၊ အဖွဲ့တစ်ခုလုံးစွမ်းအားပြည့် ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးကိုသာအာရုံပြုခြင်း၊ ကိုယ်လေ့လာသိရှိထားတဲ့ အချက်အလက်များကို အခြားသူများ မသိစေလိုတဲ့ အခြေခံစိတ်ဓါတ်ကိုထားရှိခြင်း။
၄. မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွက် လေ့လာမှုများကို လိုအပ်ပါကရန်သူများထံမှပင် လေ့လာယူရမယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်လက်ခံထားခြင်း။
၅. အဖွဲ့ဝင်မျာအတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲစေမယ့်ဆောင်ရွက်ချက်များကို မလုပ်ဆောင်မိအောင်ကြိုးပမ်းခြင်း။
၆. စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကို လပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာ ဆွေးနွေးနေခြင်းထက် အဓိကကျတဲ့ ညီညွတ်မှုတည်ဆောက်ရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်များစုပေါင်းရှာဖွေခြင်း။
၇. တော်လှန်တဲ့ပါတီဟာ လူထုတစ်ရပ်လုံးနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲများကို အဆက်မပြတ် ဖြေရှင်းပေးရင်း လူထုထဲမှပေါက်ဖွားလာရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ခြင်း။
ကျနော်တို့အပါအ၀င် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုမျိုးစုံဖြင့် တတိုင်းပြည်လုံးကောင်းစားရေးအတွက် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုတို့ကို တွေ့ကြရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုနှင့် စွမ်းဆောင်မှုတို့ကိုအမှန်တကယ် အသိ အမှတ်ပြုသည်ဆိုပါက ကျနော်တို့အားလုံးဟာ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကြီးကို ကျနော်တို့၏ အိမ်ရှေ့သို့ အရောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်ပို့ပေးသည့် အချိန်အထိစောင့်နေကြမည့်အစား ကျနော်တို့ တစ်ဦးချင်းအလိုက် တာဝန်သိစိတ်ဓါတ်အပြည့်ဖြင့် ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်အရောက် အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင် ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းအကြံပြု လိုက်ပါတယ်။
နေ့စွဲ၊ သက္ကရာဇ် (၂၀၀၅) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၉) ရက်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ယနေ့ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာ...
Issues that need to be solved in today’s Burmese D...